Rasolo André : “Mila sahy miatrika ny fampihavanam-pirenena isika rehetra” | NewsMada
Taona vaovao izao… Mby aiza ny fampihavanam-pirenena? Manazava ny avy amin’ny komitin’ny manampahaizana momba ny fampihavanam-pirenena, Rasolo André: “Raharaha iombonan’ny samy Malagasy ny fampihavanana, ka tsy hisy hanao tompony mangataka atiny isika. Samy tokony ho sahy maka ny andraikiny.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Aiza ho aiza izao ny firosoana amin’ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena amin’izao taona vaovao izao? Na ny volavolan-dalàna ny amin’izany…
Rasolo André (-): Efa natolotry ny Komitin’ny manampahaizana momba ny fampihavanam-pirenena ny filohan’ny Repoblika teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, ny 2 desambra 2015, ny volavolan-dalàna momba ny fampihavanam-pirenena malagasy. Haroso hodinihina sy holanin’ny Antenimierampirenena ho lalàna izany, araka izay mahamety azy. Hiroso amin’ny zotra vaovao ny fampihavanana malagasy manomboka amin’ny fampiharana io lalàna io.
* Fa tena ilaina ve ny fampihavanam-pirenena, ary iza eto amintsika no mila hampihavanina?
– Fanasitranana sy fanarenana no dikan’ny fampihavanana eto amintsika. Iaraha-mahita, tsy misy ady an-trano eto Madagasikara. Na izany aza, mihanaka any anaty fiarahamonina any ny lonilony sy disadisa samihafa, izay ateraky ny zara mitanila eo amin’ny fandrosoana sy fampandrosoana. Be loatra ny elanelana eo amin’ny faritra 22. Na ao anaty faritra iray aza, ohatra: feno zara vilana, fa bodoin’olom-bitsy ny harena.
Etsy andaniny, akorontan’ny adilahy politika tsy misy farany ny fiarahamonina malagasy. Mareforefo ny fanjakana repoblikanina misy eto amintsika: maloto, ohatra, ny fifidianana, tsy voahaja ny zon’ny mpifidy… Amin’izany, tsy hita intsony ny maha fanjakana tan-dalàna ny fanjakana. Anjakan’ny risoriso ny fitsarana, ny rafi-pitondrana rehetra, hatrany amin’ny Tafika sy ny polisim-pirenena.
Mandry tsy lavo loha ny vahoaka. Difotry ny fahantrana ny firenena. Very ny fahendrena malagasy. Marary i Madagasikara. Hatomboka sitranina sy alamina amin’ny alalan’ny fampihavanam-pirenena ireo rehetra ireo. Efa voa mafy loatra ny mpiray tanindrazana manerana ny lafivalon’ny Nosy, ka tsy tokony hifampiandry andraso andraso intsony.
* Ho sahy handray andraikitra ve ireo hotendrena hiantsoroka izay fampihavanam-pirenena izay? Fanontaniana any am-pon’ny Malagasy maro io…
– Tsy ireo hiantsoroka ny fampihavanam-pirenena ihany no tokony ho sahy handray andraikitra. Raharaha iombonan’ny samy Malagasy izy ity, ka tsy hisy hanao tompony mangataka atiny isika. Samy tokony ho sahy maka ny andraikiny na ny fitondrana foibe, na ny olom-boafidy, na ny antoko mpanohitra, na ny olom-pirenena tsy ankanavaka na lahy na vavy, na antitra na tanora, na mponina an-tanàn-dehibe na any ambany volo rehetra any…
Fampihavanam-pirenena miainga avy any ifotony io, andraisan’ny rehetra anjara, raha tiantsika hitondra voka-tsoa ho an’ny firenena malagasy. Samy manana ny safidy politikany, samy manana ny fiangonana ivavahany, samy manana ny tany niaviany… Fa mba tokony hisy fiaraha-mientan’ny Malagasy rehetra kosa rehefa hoe fanasitranana sy fanarenana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny resaka.
* Hiara-miasa amin’ny FFKM ve ianareo?
– Voalohany, hafa ny komitin’ny manampahaizana nandrafitra ny volavolan-dalàna, ary hafa ny FFM vaovao hajoron’io lalàna io hitantana ny fampihavanana. Manaraka izany, raha ny hevitry ny volavolan-dalàna narosonay, tokony tsy hisy fanilikilihana ny fampihavanana. Tokony hahay hiara-miasa amin’ny FFKM ny FFM vaovao, amin’ny fahefana ara-drazana, amin’ny vato nasondrotry ny tany, amin’ny Malagasy tsy ankanavaka. Samy hanana andraikitra araka ny tandrify azy izy ireo. Diso lalana ny fampihavanana raha toe-tsaina manilikilika no hanatanterahana azy.